Wararka - Maxay Yihiin Sideeda Nooc ee Wasakhda Duriinka?
(1) Qaab-dhismeedka isku-darka sadarka qayb ka mid ah
Marka caaryada la furo, caaryada la dhaqaajin karo iyo caaryada go'an ayaa la kala saaraa, sidaas darteed qaybta balaastigga ah ayaa loo soo saaraa, taas oo loo yaqaan hal weji oo dusha ka saaraya oo waliba loo yaqaan caaryada laba-saxan ah. Waa qaabka ugu fudud uguna aasaasiga badan ee caaryada la isku duro. Waxaa loo qaabeyn karaa sida hal caaryada irbadda daloolka ama caaryada duritaanka ee isku-dhafan oo badan sida loo baahdo. Waa caaryada la isku duro ee ugu badan ee la isticmaalo.
(2) Kala-saarista dusha sare ee laba-geesoodka ah
Mashiinka cirbadeynta dusha sare ee labada qaybood ayaa leh laba dusha sare. Marka loo barbardhigo hal caaryada cirbadeynta dusha sare, labada qaybood ee cirbadeynta dusha sare waxay ku dareysaa saxan dhexdhexaad ah oo la dhaqaajin karo (sidoo kale loo yaqaan saxanka albaabka la dhaqaajin karo) ee qaybta caaryada go'an. Waxay ku qalabeysan tahay albaabbo, orodyahanno iyo qaybo kale iyo qaybo looga baahan yahay wasakhyo go'an), sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan nooc saddex-saxan ah (saxan dhaqaaqa, saxan dhexdhexaad ah, saxan go'an) caaryada la isku duro, oo badiyaa loo isticmaalo hal irrid oo hal nooc ah quudinta. Dareemo ama wasakhda duritaanka godad badan. Marka caaryada la furo, saxanka dhexdhexaadka ah ayaa laga soocayaa sheybaarka go'an masaafada go'an on boostada hagaha of caaryada go'an si meesha looga saaro isku-darka nidaamka shubaya ee u dhexeeya labada sheybaar. Labada qaybood ee kala-soocidda duritaanka dusha sare leh waxay leedahay qaab-dhismeed adag, kharashka wax-soo-saarka sare, iyo ka shaqaynta qaybaha adag. Guud ahaan looma isticmaalo wax ka sameynta wax soo saarka balaastigga waaweyn ama dheeriga ah.
(3) Wax taaj oo kale oo duritaan ah oo lagu sameeyo xariiq kala goys ah iyo farsamo jiidan oo muhiim ah
Marka qaybta balaastiggu ay leedahay godad dhinac ah ama gunta hoose, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo xuddun ama isbarbardhig dhinac u dhaqaaqi kara. Kadib duritaanka cirbadeynta, caaryada la dhaqaajin karo ayaa marka hore hoos loo dhigaa masaafo cayiman, ka dibna qaybta jilicsan ee pin pin oo ku dhegan shaxanka go'an ayaa ku qasbaya slider inuu u dhaqaaqo banaanka, isla mar ahaantaana, riixaha farsamada kala-bixinta ayaa riixaya saxan riix leh si uu u qaabeeyo qaybta balaastigga ah. Ka saar xudunta.
(4) Wax taaj oo kale oo lagu duro
Qaab dhismeedka qaaska ah ee qaybo balaastik ah awgeed, wasakhda cirbadeynta ayaa loo baahan yahay in la siiyo qaybo wax dhaqaajin kara, sida wasakhda la qaadi karo ee la qaadi karo, wasakhda la guuri karo ee la dhaqaajin karo, waxyaalaha la gelinayo ee la dhaqaajin karo, guntimaha dunta la dhaqaaqayo ama giraanyada, iwm. laga soo qaaday qaybta balaastigga ah.
(5) Mawduucyada otomaatiga ah ee dejinta qalabka duritaanka
Qaybaha balaastigga ah ee leh dunta, marka loo baahdo kala-goynta otomaatigga ah, xudun wareeg ah ama giraan ayaa lagu dhejin karaa caaryada, iyadoo la adeegsanayo furka furitaanka caaryada ama habka wareejinta ee mashiinka wax lagu mudaayo ee duritaanka, ama qalab gudbinta gaar ah oo lagu kaxeeyo dunta giraan udub dhexaad ah ama guntin dun leh ayaa wareegaysa si loo sii daayo qaybta balaastigga ah.
(6) wasakhahaasi cirbadaha aan orodka lahayn
Caaryada duritaanka aan orodka lahayn waxaa loola jeedaa habka kululaynta adiabatic ee orodyahanka si ay u ilaaliso caaga u dhexeeya sanka iyo godka mashiinka wax lagu durayo ee duritaanka ku jira xaalad dhalaal ah, si aysan u jirin wax iskuxirma nidaamka shubista marka qeybta caaga ah la qaato soo baxa marka caaryada la furo. Midka hore waxaa loo yaqaan caaryada cirbadeynta adiabatic runner, tan dambena waxaa loo yaqaan caaryada duritaanka kulul ee orodka kulul.
(7) Caaryada cirbadda midig-xagal leh
Qaabab isku-duro durid-xagal ah ayaa kaliya ku habboon mashiinnada wax lagu duro ee xagasha. Si ka duwan wasakhaha kale ee wax lagu duro, jihada quudinta ee noocan ah caaryada inta lagu jiro wax qaabaynta waxay u dhigantaa jihada furitaanka iyo xidhitaanka. Jidkiisa socodka ugu weyn waxaa loo dejiyaa labada dhinac ee dhaqaaqista iyo gogosha kala-bixidda caaryada go'an, aaggisa isweydaarsigu caadi ahaan waa joogto. Tani way ka duwan tahay wasakhaha kale ee la isku duro. Dhamaadka wadada socodka ugu weyn waa in laga hortago mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta ah. Mashiinka iyo dhamaadka marinka kanaalka weyn ayaa duugmay oo qaab daran, waxaana la bixin karaa gelinta kanaalka socodka la beddeli karo.
(8) Caaryada duritaanka ee habka sii deynta caaryada ee caaryada go'an (Caagga)
Inta badan qaabka wasakhda, qalabka ejection-ka ayaa lagu rakibay dhinaca caaryada la dhaqaajin karo, taas oo ku habboon shaqada qalabka ejection ee furitaanka iyo xidhitaanka nidaamka caaryada ee mashiinka wax lagu duro. Soo-saarka dhabta ah, maxaa yeelay qaybo caag ah qaarkood ayaa ku xaddidan qaab ahaan, waxaa fiican in looga tago qaybta caagga ah dhinaca caaryada go'an. Tani waxay ka dhigeysaa qaybta balaastigga ah inay ka soo baxdo caaryada, sidaas darteed waa in lagu dhejiyaa dhinaca caaryada go'an. farsamo.
Xiga: Waa Maxay Caaryadu?
Hore: Dhimista Wax taaj oo kale ee Mudista Caaga ah